Gịnị bụ Apple music ọrụ usoro?
Apple bụ otu n'ime ihe ndị kasị ihe ịga nke ọma na ụlọ ọrụ na ụwa na a maara bụghị naanị n'ihi ya ebube na ngwaahịa gụnyere iPhone, iPad iPod, Mac na ndị ọzọ kamakwa maka nke ọrụ na ọ na-enye gụnyere Apple Music. Apple music bụ Apple onwe music gụgharia Portal na-enyere ọrụ gafee ụwa iji nweta amamiihe music na redio ụgbọ. E nwere ọtụtụ ụzọ site na nke Apple na-eme ka music dị ka ị na ndị na-esonụ bụ ụfọdụ ozi ọzọ na otu ihe ahụ.
1. Music ngwaọrụ-ụfọdụ n'ime ngwaọrụ site na Apple na nke ị pụrụ ịnụ ụtọ music nakwa enuba t site Apple music agụnye iPhone, iPad na iPod aka. Ọ na-arụ music on Mac na site ndị a ngwaọrụ; ị nwere ike ịnweta ọtụtụ nde songs, ụfọdụ magburu onwe redio ụgbọ na ọtụtụ ndị ọzọ na atụmatụ nke Apple music. Ụbọchị ndị a, iPhone na iPad abụghị naanị ntị na mbadamba ma kwesịrị ekwesị music Player n'otu n'otu. Ị pụrụ ọbụna na-enwe music si Apple na PC gị na nke nwere iTunes ebudatara na ya. Site n'ime otú ahụ, ị ​​nwere ike mmekọrịta PC na iOS ngwaọrụ nke mere na music nwere ike zigara ọsọ ọsọ na mfe.
2. Music Store-mgbe ọ na-abịa a music ụlọ ahịa, Apple awade iTunes ya global-ege ntị. iTunes bụ ihe magburu onwe ngwa ahịa na n'elu ikpo okwu nke na-eme ka o kwe gị ịzụta, download na iyi music on ọ bụla nke gị iOS ngwaọrụ nakwa nyefee music site na otu ngwaọrụ ọzọ. iTunes na-achọrọ maka nbudata Apple music ngwa na ngwaọrụ gị na ọ dị mkpa na ị mgbe niile nwere emelitere version nke ya. Site emelite iTunes, ị ga-enwe ike ịnụ ụtọ ọtụtụ ndị ọzọ uru Apple music ọrụ na ndị ọzọ na music nyiwe.
3. Music nkwanye-ruo ọnwa ole na ole gara aga, i nwere ịdabere ka Spotify na ndị ọzọ na music gụgharia ọrụ na-enwe music na gị iOS ngwaọrụ ma kemgbe Apple ka ulo oru ya n'elu ikpo okwu, nke a nke e kpebiri. Apple Music bụ a na ndenye aha dabeere music gụgharia n'elu ikpo okwu nke bụ free na mbụ maka a ikpe oge nke 90 ụbọchị na ahụ na-aghọ ugwo maka ụdi ojiji. Nke a n'elu ikpo okwu na-ekwe nkwa ọma ụda àgwà, ohere ihe ebi-amụba ndepụta nke music, playlist e kere eke na-ekere òkè na ọbụna ụmụ mmadụ curated music aro. Na ọ bụ dị abụọ na ụdị memberships nke bụ onye otu maka $ 10 kwa ọnwa na ezinụlọ atụmatụ maka $ 15 kwa ọnwa.
4. Music App-E wezụga-arụ ọrụ na Apple ngwaọrụ, Apple Music ga-adịghị anya-oru maka Android ngwaọrụ dị ka mma. Apple ga-eme ka Apple music dị ka ihe ngwa nke mere na gam akporo ọrụ nwere ike ibudata ya na mgbe ahụ enweta ya na gị ntị na mbadamba dị ka mma. Ọ na-atụ anya na ọbụna ndị gam akporo ọrụ; Apple music ngwa ga-arụ ọrụ brilliantly na ga-enye fọrọ nke nta otu atụmatụ na ọ na-enye na-Apple ọrụ. Ya mere ọ bụrụ na ị bụ onye Android onye ọrụ, mgbe ahụ, ị ​​ga-enweghị ichere ukwuu maka amamiihe Apple music ngwa na-eji.
Best YouTube Audio Downloader na Music chọpụtara
Free Mp3 Music Download Online enweghị Registration N'iwu
Olee otú Play Google Music-anọghị n'ịntanetị
> Resource> Music> Apple Music ọrụ